Wasiirka Madaxtooyada Maamulka Somaliland oo la cadeeyay in uu Shabaab la shaqeeyo (qaabkuu ula shaqeeyaa?) | warsugansomaliya.wordpress.com
Gudoomiyaha Xisbiga Mucaaradka UCID, Feysal Cali Waraabe ayaa magaalada Hargeysa hadal uu saxaafada ugu sheegay uga jawaabay eedeyn uu u jeediyey Wasiirka Madaxtooyada maamulka Somaliland, Xersi Xaaji Cali Xasan.
“Wasiirka Madaxtooyadu waa Shabaab. Hada kahor waxa uu damcay in uu dilo Daaahir Riyaale Kaahin xillgii uu madaxweynaha ahaa oo uu Bastoolad ula galay madaxtooyada isaga oo kadibna dadkii u sheegay in uu ku laba qalbiayay in uu dilo Daahir Riyaale Kaahin kurigana uu ku fariisto”, Feysal Cali Waraabe ayaa yiri.
Waxa uu intaa raaciyay Gudoomiyaha UCID, “Mar kale waxa uu sameestay ciidamo oo gaadiid ayuu saartay qoryo isaga oo Shabaabna ka dalban jiray ciidan ay siiyaan si uu u qabsado deegaanada Somaliland. Mar waxa uu ka tirsanaa gudiga diiwaan gelinta deegaanada Somaliland sida uu uga tegayna waa la ogyahay kadib markii uu qalday diiwaan gelinta oo qalad ba’an uu geestay isaga oo aqoon u lahaa qalabkii diiwaan gelinta”.
“Xersi Xaaji Cali Xasan waxa uu Kalshaale ka sameeyay laba Barkadood oo fidna deegaanka ka abuurtay, waan kala hadlay hasa yeeshee jawaabta uu iga siiyay halkaan laga meeshi karo. Buuhuudle waxa ay mowqif iska taageen shirkii Taleex ee Khaatumo isaga oo go’aankaasi diidanna Xirsi isaga oo janan ah ayuu xilligaasi weerar ku qaaday deegaankaasi oo wali dhibaatadii ka dhalatay taagantahay”, Feysal ayaa ku ceebeeyay Wasiirka madaxtooyada Maamulka Somaliland.
Feysal Cali Waraabe ayaa hadalkaan uga jawaabayay eedeyma uu usoo jeediyay Wasiirka Madaxtooyda Somalinad, Xersi Xaaji Cali Xasan, uu ku tilmaamay Qaa’inul wadan wax badan qalday.
← Akhri labo qodob oo ay Dowlada uga cabsi qabto Sheekh Xasan Daahir Aweys hadii uu dalka sii joogo iyo Shiikh Xasan Daahir Aways oo
Taliska Meletariga oo cadeeyay in ay Shabaab soo dhaweeyeen ciidankii Kenya ay ka saartay Kismaayo →